घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू क्यामेरोनियन फुटबल खेलाडीहरू आंद्रे ओनाना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो Andre Onana जीवनी उनको बचपनको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, प्रेम जीवन (प्रेमिका / पत्नी तथ्य), नेट मूल्य र जीवनशैली को बारे मा जानकारी बिच्छेद। यो क्यामेरूनियनको व्यक्तिगत जीवनको पूर्ण विश्लेषण हो जुन उहाँ आफ्नो सृष्टिकर्ताको बर्षदेखि शुरू भई धेरै लोकप्रिय भयो।
जीवन र उदयको आन्द्रे ओनाना। Ytimig र Twimg बाट छविहरू।
हो, तपाईं र मलाई थाहा छ कि उहाँ युरोपमा सबै भन्दा राम्रो शट स्टपर हो। यद्यपि धेरैले आन्द्रे ओनानाको जीवनी पढेका छैनन जुन धेरै शैक्षिक हो। अब, थप कुनै विज्ञापन बिना, हामी सुरुको दिनहरू र परिवारको तथ्यहरूको साथ सुरु गरौं।
आंद्रे ओनानाको बाल्यकाल कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, शट-स्टापरलाई "ओनन्स" उपनाम दिइएको छ। आन्द्रे ओनानाको जन्म अप्रिल १21996 the को दोस्रो दिन क्यामरूनको मध्य भागमा रहेको Nkol Ngok गाउँमा भएको थियो। क्यामेरोनियाका फुटबलर उसको आमामा जन्मेका थिए जसलाई एडिले ओनाना र उसको बुबा फ्रान्कोइस ओनाना भनेर चिनिन्छ।
आंद्रे ओनानाको परिवार मूल:
शट-स्टापर पश्चिम अफ्रीकाको बोनफाइड नागरिक हो। अन्त्रे ओनानाको परिवारको उत्पत्ति निर्धारण गर्न गरिएको अनुसन्धानको नतीजाले उनी याउन्डे फang जातीय समुदायका हुन् भनेर संकेत गर्दछ। यस जातीय समूहले क्यामरूनको केन्द्र क्षेत्र हावी गरेको छ।
Andre Onana Yaounde Fang जातीयता- Pinimg को हो।
आन्द्रे ओनानाको बढ्दो बर्ष:
के तपाईंलाई थाहा छ भविष्यको गोलकी चारजना भाइहरूसँगै एनकोल एनगोकमा भएको आफ्नो जन्म गाउँमा हुर्केकी छे। हामी आन्द्रे ओनाना भाइहरू दुईलाई वारिनर र इमानुएल भनेर आधिकारिक रूपमा चिन्न सक्छौं। उसको सामाजिक मिडिया तस्वीरहरूको आधारमा, हामीले महसुस गरेका छौं कि गोलकीपरसँग गाउँमा हुर्काउने राम्रा सम्झनाहरू छन् जसका बासिन्दाहरू खुशी छन् र शान्तिमय छन्।
आंद्रे ओनानाको परिवार पृष्ठभूमि:
शान्ति र खुशीले धनलाई संकेत गर्दैन किनकि आन्द्रे जस्तै रोगबर्ट गीत (आफ्नो वरिष्ठ देश मानिस), एक गरीब परिवार को हो। उनीहरूको घरमा बिजुली थिएन जबकि तत्कालीन केटा र उनका भाइबहिनीहरूले नजिकैको नदीमा नुहाए। यद्यपि, आन्द्रे ओनानाका अभिभावक (तल हेर्नुहोस्) मेहनती व्यक्तिहरू थिए जसले मध्यवर्गमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्।
आंद्रे ओनानाका अभिभावकलाई भेट्नुहोस्। ।: Ajaxnl।
कसरी क्यारियर फुटबल आन्द्रे ओन्टानाको लागि सुरु भयो:
मेहनती अभिभावकको रूपमा, एडले र फ्रान्कोइस युवा गोलकीपर शिक्षाविद्हरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्थे। यद्यपि उनी फुटबल खेल्न विशेष गरी गोलकीप गर्ने कुरामा चासो राख्दथे, त्यो खेलको स्थान जुन उनी ज्यादै सानै उमेरदेखि नै अपनाएको थियो।
ओनाना ११ बर्षको उमेरमा, ऊ बालुवाको मैदानमा खेलिरहेको थियो जब शमूएल इटो'अकेडमीको एक स्काउटले उसलाई भेट्टायो। यसैले पेशेवर फुटबलमा उसको क्यारियर निर्माण सुरु भयो।
क्यारियर फुटबल फुटबलमा आंद्रे ओनानाको शुरुआती वर्षहरू:
यो शमूएल इटो अकादमीमा थियो कि गोलकीपिंग प्रोडिजीले तीन बर्ष उनको भूमिकाको आधारभूत कुरा सिके। ओनाना यसमा थिए, उनी व्यापक रूपमा आफ्नो उमेर समूहका लागि क्यामरूनमा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरका रूपमा परिचित थिए। यस्तो मान्यताको साथ बार्सिलोनाका रूचिहरू आए जुन उनीहरूले उनीहरूको ला मासियामा विकास भएको देख्न खोजे।
Andre Onana को रोड फेम जीवनी कथा:
जब ती जवान ला मासिया आइपुगे उहाँ केवल १ 13 वर्षको हुनुहुन्थ्यो र परिवारका कुनै सदस्यसँग उहाँ हुनुहुन्नथ्यो। यो उमेरमा सबै छोड्न सजिलो थिएन। न त कुनै भाषा सिक्न उसलाई सजिलो लाग्यो।
यद्यपि उनी युरोपियन भूमिमा फुटबल खेल्न पाउँदा खुसी थिए र खेलकुदलाई आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। २०१ wonder मा डच क्लब अजाक्समा उनको चालमा क्लबको श्रेणीमा उनको वृद्धि हिचको कुनै आश्चर्यको कुरा होइन।
Andre Onana को ख्याति जीवनी कथा को उठ्नुभयो:
के तपाईंलाई थाहा छ क्लबमा पुगेको केही दिन पछि "ओनन्स" एजेक्सको रिजर्भ टीमको लागि डेब्यू गरे? उनले आगामी बर्षमा सुधारिएको करारका लागि कागजमा पेन राखे। आफ्नो वरिष्ठ जस्तै शमूएल एटोओओनानालाई एकपटक सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कारका लागि उम्मेदवारका रूपमा बेलन डी'ओर समारोह (२०१ 2019 मा) देखा पर्‍यो।
हुनत एलिसन बेकर ओनानालाई हराउन अत्यन्तै मन पराउने पुरस्कार जित्न धेरै समय लाग्नेछ यदि हामी पुरस्कार पछि अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेको देख्नेछौं। यो अब समाचार छैन कि उनी चेल्सीबाट रूचि राख्दैछ र प्रिमियर लिगमा खेल्दा निश्चित छ कि उसले पुरस्कारको प्रतिस्पर्धी दावेदार बनायो।
आन्द्रे ओन्टानाको प्रेमिका को हो?
गोलकीपरको सम्बन्ध जीवनमा बढ्दै, धेरैलाई थाहा छैन कि गोलकीपर मेलानी कामयौ डेटि। गर्दैछ। त्यहाँ lovebirds भेटे र डेटिंग शुरू गर्दा को बारेमा धेरै थाहा छैन। जे होस्, हामी पक्का जान्दछौं कि मेलानी एक आमा र उद्यमी हुन्।
उनी ओमानानासँग केही वर्ष रोमान्टिक रूपमा संलग्न भइन्। अरु के छ त? यस जोडीको सँगै एक छोरा छ जसको नाम आन्द्रे जून (जन्म २०१ 2019) हो। ओनानाले बच्चालाई असाध्यै माया गर्छिन् र उनीलाई "विशेष बच्चाको रूपमा वर्णन गर्छिन् जसलाई उनी बुबा हुन पाएकोमा गर्व गर्दछन्।"
आंद्रे ओन्टानाको पारिवारिक जीवन:
गोलमालका लागि फुटबलको अगाडि र पछिको पारिवारिक रूपमा आउँछ र हाम्रो रुचि प्रोफाइल एक अपवाद होईन। हामी तपाइँलाई आन्द्रे ओन्टानाका अभिभावक, भाईबहिनी र आफन्तहरूका बारे तथ्यहरू दिन्छौं।
आंद्रे ओनानाका अभिभावकहरूको बारेमा:
एडेल र फ्रान्कोइस क्रमशः ओनानाका आमा र बुबा हुन्। तिनीहरू मेहनती अभिभावकहरू हुन् जसको समर्थन ओनानाले आफ्नो क्यारियर विकासको क्रममा भर पर्थ्यो। जे होस् दुबै आमाबाबुको गोलकीको शैक्षिक प्रगतिको लागि प्राथमिकता थियो, बार्सिलोना कल आउँदा उनीहरूले उनको फुटबल क्यारियरलाई समर्थन गर्नुपर्‍यो। के तपाईंलाई थाहा छ अन्द्रिया ओनानाका आमा बुबा उसको खेल हेर्न एम्स्टर्डम गएका छन्? उनीहरूले उनीहरूलाई कत्ति माया गर्छन् र गर्व गर्छन् भन्ने यो स .्केत हो।
आन्द्रे ओनाना आफ्ना सहयोगी अभिभावकहरूको साथ। ।: Ajaxnl।
Andre Onana का भाई बहिनीहरूको बारेमा:
गोलकी ठूला चार जना साना ज्ञात भाइहरूसँग हुर्केका थिए जसमा वार्नर र इमानुएल समावेश छन्। चार भाइहरू मध्ये एक उनको 32२ वर्षको उमेरमा मरेका थिए। ती तेस्रो भाइको कुनै रेकर्ड छैन, न त गोलकी छोरीलाई बहिनी भनेर चिनिन्छ।
Andre Onana भाइहरू Wrainer (दायाँ) र Emmanuel संग। ।: इमगुर।
Andre Onana का नातेदारहरूको बारेमा:
गोलकीको नजिकको परिवारबाट टाढा, उसको पुर्खाको विवरणहरू अज्ञात छ विशेष गरी यो उहाँकी आमा र बुवा हजुरबा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। थप रूपमा, ओनाना काका, काकी, भतिजा र भतिजीहरूबारे धेरै थाहा छैन। तर हामीलाई थाहा छ कि उसको चचेरो भाई छ जो फेब्रिस ओन्डोआ नामबाट जान्छ। ओनाना जस्तै फेब्रिस बार्सिलोना युवा प्रणालीमा थिए। उहाँ हाल बेल्जियम क्लब केभी ओओस्टे र क्यामेरून राष्ट्रिय टीमका गोलरक्षक हुनुहुन्छ।
आन्द्रे ओानाना कजिन फ्याब्रिस ओन्डोआ पनि गोलकीपर हो। 📷: Tmssl।
आंद्रे ओनानाको व्यक्तिगत जीवन:
"ओनन्स" सँग फुटबल कोर्टको आयामभन्दा बाहिरको धनी जीवन छ र त्यहाँ त्यस्तो धेरै कुरा छ जुन उहाँको दुर्लभ शान्त व्यक्तित्वको बारेमा खेलको पिचबाट टाढा छ। धेरैले उहाँ आफू दृढ, ऊर्जावान, स्वतन्त्र र आफ्नो व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा तथ्य खुलाउन खुला छन् भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्छन्। परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउने पक्ष ओनानालाई फिल्महरू हेर्न, यात्रा गर्ने, भिडियो खेलहरू अन्य रुचिहरू र रुचिहरूको बीचमा मनपर्दछ।
आन्द्रे ओन्टानाको जीवनशैली:
आउनुहोस् हामी कसरी गोलकी बनाउँछ र आफ्नो पैसा खर्च गर्दछ। के तपाईंलाई थाहा छ उहाँसँग worth मिलियन युरोको सम्पत्ति छ (WTFoot रिपोर्ट) यस बायो लेख्ने समयमा? ओनानाले त्यस सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा आकर्षक ज्याला र तलबबाट बनायो जुन शीर्ष उडान फूटबल खेल्दै आउँछ।
ऊसँग अनुमोदनबाट प्रवाह हुने स्थिर स्ट्रीम पनि छ। त्यस्तै, तलको फोटोमा देखिएझैं एम्स्टर्डममा उसको घरको गेराजमा उभिएको महँगो मर्सिडीज बेन्जलाई देख्नु कुनै अचम्मको कुरा होइन।
आंद्रे ओनाना तथ्यहरू:
हाम्रो गोलकीको बायो लपेट्न, यहाँ उसको बारेमा थोरै ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
तथ्य # १ - फिफा २०२० रेटिंग:
ओनानासँग सम्भावित of of मध्ये 85 89 अंकको राम्रो समग्र फिफा रेटिंग छ। यस्तो रेटिंगको साथ उनी २ अंक उच्च भन्दा माथि छन Kepa र4बिन्दुहरू भन्दा जोर्डन पिकफोर्ड। के ओनाना जवान र चहकिलो छैन?
यी राम्रो तथ्या .्कको साथ, तपाईं सहमत हुनुहुन्छ Andre Onana एक उज्जवल भविष्य मिल्यो। 📷: SoFIFA।
तथ्य #2- ट्रिभिया:
के तपाईंलाई थाहा छ ओनानाको जन्म वर्ष धेरै टेक र मनोरन्जनात्मक घटनाहरूको लागि पर्यायवाची हो? यो जापान प्रोग्रामिंग भाषाको पहिलो संस्करण विमोचन भएको बेला जापानमा डीभीडीको प्रक्षेपण भएको बर्ष हो। यो १ 1996 XNUMX in मा पनि थियो कि स्वतन्त्रता दिवस र ए टाइम टु किल जस्ता क्लासिक फिल्म हिट सिनेमाघरहरू।
आन्द्रे ओनानाले आफूलाई विशेष धर्मसँग सम्बद्ध गर्न सकेको छैन। त्यस्तै गरी, यो अफ्रिकी विश्वासयोग्य हो कि हैन भन्ने निर्णायक रूपमा भन्न सकिदैन। तर यी अनमोलताहरू उनी एक इसाई भएको पक्षमा छन्।
तथ्य #4- आंद्रे ओनानाको तलब ब्रेकडाउन:
डलरमा कमाई ($)
प्रति वर्ष £ 903,029 € 1,000,000 $ 1,193,481
प्रति महिना £ 75,252 € 83,333 $ 99,456
प्रति हप्ता £ 17,365 € 19,230 $ 22,951
प्रति दिन £ 2,474 € 2,739 $ 3,269
प्रति घण्टा £ 103 € 114 $ 136
प्रति मिनेट £ 1.72 € 1.90 $ 2.27
प्रति सेकेन्ड £ 0.02 € 0.03 $ 0.04
कमाई गरिएको छ किनकि तपाईं यो पृष्ठ हेर्न शुरू गर्नुभयो।
माथिको तथ्या .्कमा, औसत क्यामेरोनियनले कम्तिमा पनि काम गर्नुपर्दछ एघार वर्ष र १० महिना लगभग, 65,743,410१० कमाउन पश्चिमी अफ्रिकी सीएफए फ्रैंक जुन ओनाना एजेक्सको साथ एक महिनामा घर लिएर जान्छ।
पुरा नाम André Onana
जन्म मिति अप्रिल १21996। को दोस्रो दिन
जन्मस्थान क्यामरूनको केन्द्र क्षेत्रको Nkol Ngok को गाउँ
प्ले गर्दै लक्ष्य राख्दै
आमाबाबुले एडले (आमा), फ्रान्कोइस (बुबा)
भाई बहिनीहरू वार्नर र इमानुएल (भाइहरू)
प्रेमिका मेलानिया कामयौ
बच्चाहरु आन्द्रे जूनियर
सोख चलचित्रहरू हेर्दै, यात्रा गर्दै र भिडियो गेमहरू खेल्दै।
नेट मूल्य १.5मिलियन यूरो
क्यामेरूनियनको जीवन यात्राको बारेमा यो आकर्षक लेख पढ्न समय निकाल्नु भएकोमा धन्यवाद। कुनै श doubt्का बिना, आन्द्रे ओनानाको बाल्यकालको कथा उत्साहजनक थियो र हामी आशा गर्छौं कि यसले तपाईंलाई जुनसुकै मूल्य भए पनि तपाईंको जुनसुकै पछि लाग्न प्रेरित गरेको छ। Lifebogger मा हामी आफैंमा अफ्रिकी फुटबलरहरु जीवनी फिफाई र सटीकता संग प्रदान गर्व मा गर्व गर्दछौं। यदि तपाईं कुनै अफिशमा भेट्नुभयो भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा तल टिप्पणी दिनुहोस्।